Izintaba ezinkulu Izintaba ezinkulu, iJizera Mountains, iPharadesi iPharadesi
Izintaba Giant (Riesengebirge ngesiJalimane, Polish Karkonosze) kukhona iyunithi geomorphological futhi kunezintaba eziphakeme kunazo zonke e-Czech futhi ezinkangala Czech. Ihlala enyakatho-mpumalanga yeBohemia (ingxenye yaso esentshonalanga itholakala Liberec esifundeni, empumalanga Hradec Kralove) neningizimu Polish eSilesia. Intaba ephakeme kunazo zonke ezintabeni zeGuant is Sněžka (1603 m). Ngokusho kwamahemuhemu, i-Krkonoše Mountains igcina umoya wezingqikithi ze-Krakonoš. Ngenye yezintaba ezithandwa kakhulu e-Czech Republic.
Okubanzi entabeni yonke kuhlanganise Giant kwaba sezivele zikhona eminyakeni eminingi edlule wachazwa ngokuthi umsunguli Sudetenland, okuyinto cishe igama Celtic umsuka (ngokuvamile lihunyushwa ngokuthi intaba izingulube) noma imvelaphi Balkan (elihunyushwa ngokuthi Imbuzi Intaba). UPtolemy (mayelana 85-165) esetshenziselwa lanamuhla Sudetenland amagama Sudetayle (i-ore Mountains) kanye Askiburgion (ikakhulukazi Izintaba, ngasedolobheni Askiburgium phansi, mhlawumbe ukuze Lusatian Izintaba, kuhlanganise lezi zintaba). UDoo Cassius ku-3. Ikhulu leminyaka lasebenzisa igama elithi Vandalski Izintaba ze-Askiburgion. Ngemva amabalazwe Ptolemaic wafika Czech Republic Bohuslav Balbin futhi Pavel rock avela ngenhla usebenzisa igama isandiso Sudetenland kulo lonke band (17. Century).
I-Krkonose Mountains ngokwayo ibizwa ngokuthi ihlathi leBohemian ezincwadini zeRussia ze-1095, ne-Snowy Pulkava e-1380 ibizwa ngokuthi i-Snowy Mountains.
Zintaba igama ekuqaleni lalisho kokubili Kolo lanamuhla okusezingeni eliphezulu futhi kubhayela noma Kokrháč. Ukumaka NOGOLIYATHI Izintaba (ubunye isifazane ", lo" zintaba) kuya bulala livela 1492 e irekhodi besigaba Štěpanice izindlu ku Wallenstein futhi Jilemnický iqhaza 1499 ke ngesenzo Vladislav II., I endala ibalazwe abasindile lelo gama wasebenza UNicholas Klaudyan ku-1518. Wenceslaus Hajek e indaba yakhe 1541 wasebenzisa igama lwesiCzech Silesian zintaba.
Ubufakazi lokuqala isandiso kwegama ukuze yonke intaba ivela 1517 lapho isihloko Krkonošské ezintabeni, zintaba elilotshwe ukuthi umphelelisi uSathane sibalo. Giant Igama elifingqiwe yaqale bodokotela ngonyaka 1601. Igama uvame kubhekwa esuselwe elidala Slavic base "entanyeni" noma "cracker", okusho ukuthi into encane pine noma entabeni Pines, uJosef Jungmann ahlanganiswa negama zamaJalimane noma Celtic isizwe Corconti noma Korkontoi, esashiwo uPtolemy, ne ngokucabangela ukuthi okukhulunywa ezintabeni Asciburgius kwaba ezifanayo namuhla lezi zintaba (Korkontoi akadingi ukuhlala kuphi eduze emithonjeni Vistula, noma kunalokho Beskydy). Olunye ucwaningo ahumushe umsuka igama Proto isisekelo, okusho "emthambekeni enamadwala, ensimini enamadwala" bese uphakamisa isixhumanisi enegama Ukraine Gorgany izintaba e-Eastern Carpathians.
okulingana German (Czech futhi ohlangothini Silesian yezintaba kwaba kuze 1945 owakhiwe iningi amaJalimane) nencazelo zintaba (Riesengebirge, zintaba ngesiNgisi) livela igama Risenberg, okuyinto Agricola (Georgius?) Ngo 1546 kumakwe ehlobo. Kobuningi Riesengebirge wonke intaba sokuqala esilotshwe ngonyaka 1571.
Isisekelo sokubunjwa kwezinto eziphilayo sakhiwa slate esiphezulu se-crystalline slate kanye namadwala ase-preamistoric metamorphic (clamp). Engxenyeni esempumalanga yezintaba, ama-limestones ajwayelekile. I-crystallin yamandulo ifinyelela kwezinye izindawo kanye ne-Krkonoše-Jizerský pluton (i-granite). Ama-glaciers ama-quaters ayesengama-glaciers aqondisa emaphandleni. Kwakukhona izinhlobo ezimbili zama-glaciers. Eyokuqala yayiyi-glaciers ye-valley futhi eyesibili yayiyihlobo leScandinavian. Ipulazi elide (intaba kaDeveli, njll) inamathengi ayo. Ukuze uthole umbono ongcono, singabheka ama-icebergs eScandinavia afakazela ukuthi usekuphi zintaba kungabuka. Isibonelo esihle kakhulu somsebenzi we-glacial, isibonelo, imayini ye-Elbe noma iMayini enkulu, okuyinto isigodi esakhiwa yi-glaciers (troges). Ezinye izimpahla ze-glacial yizinhlamvu ze-glacial (v zintaba I-karya yaziwa ngokuthi "umgodi"). Kufanelekile ukukhuluma ngeKotelní jámy kanye negodi leqhwa ePoland. UKary ungenye yezinto ezibaluleke kakhulu esingayenza zintaba ngoba yizona ezingavamile kunazo zonke ezintabeni ezinkulu. Umsebenzi we-Cryogenic v zintaba kubalulekile ukukhuluma, ngokwesibonelo, olwandle olwandle olunzulu (amagquma aphezulu) noma ama-log cabrized frozen.
Engxenyeni yezintaba zaseGiant kunezinhlobonhlobo zezilwane nezilwane. V zintaba yizindawo ezinkulu kunazo zonke ezingaphezu kwemkhawulo ophezulu wehlathi e-Czech Republic. Ekuphakameni kwe-1200-1300 emgqeni wehlathi kuphelile lapha. Ngenhla yindawo yokuzamazama komhlaba, isosha, itshe kanye nolwandle olwandle. Le biotope engavamile kakhulu ibizwa ngokuthi i-arc-alpine tundra. Kwezinye izindawo sithola ngisho nezimbongolo ze-Peat. I-spruce yasekuqaleni yayincithakaliswa yithonya lala mafomu. Esikhundleni esiphansi, i-beech ne-spruce monocultures ikhula. I-Malacofauna yezintaba ze-Giant iqukethe izinhlobo ze-90 zama-molluscs.
Ensimini ka lezi zintaba iseningizimu Giant Mountains National Park (KRNAP) endaweni 36 400 ha, ngubani kwathiwa ngonyaka 1963, futhi Karkonoski Ipaki Narodowy (KPN), eyasungulwa ngo-1959. Izoni ayisivikelo Esiqiwini ohlangothini Czech kwendawo 18 400 ha. Izintaba nazo njengoba 1992 Bilateral Biosphere Reserve esasimenyezelwa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (indawo engxenyeni Czech we 54 800 ha). I-KRNAP ihlukaniswe ngo-I., II. no-III. izindawo zokuvikelwa, lapho indawo yokuqala ewuphawu oluyigugu kakhulu futhi oluqinile kunazo zonke ukuvikelwa. Lokhu kusho, isibonelo, ukulinganisa lapho ku-I. no-II. indawo ayinqatshelwe ukuhambisa ngaphandle kwezimakethe ezivakashelwe kanye nezindlela zokuhamba. Ensimini ka lezi zintaba ibizwa nangokuthi u-Bird Area Okubalulekile Bird Area, ehlanganisa wonke Biosphere Reserve, ngokulandelana. ipaki kazwelonke kubandakanya indawo yokuvikela.
IziNtaba zeGuant zivela endaweni yokubukeka intaba yezintaba ezinamandla kakhulu eCzech Republic. Ama-summit aphezulu ngenhla ye-1400 ingafaniswa neGreen Green. Ukushisa kuyahluka ngokuyinhloko ngokuphakama. Isibonelo, izinga lokushisa lokujwayelekile kuTrutnov yi-6,8 degrees Celsius, ngenkathi eS Sněžka, okuyindawo ebandayo kakhulu yaseKronoše, izinga lokushisa ngonyaka liyi-0,2 degrees Celsius. Ngesikhathi esifanayo, indawo ebanda kakhulu eCzech Republic. Inani lemvula eNtabeni YeGiant ixhomeke ekujuleni nasezindaweni zomgwaqo. Iqiniso liwukuthi iziteshi eziseMfuleni iGiant Western zinemvula eminingi kuneziteshi eziseMpumalanga Mountains ezimpumalanga phakathi nonyaka ngoba ukugeleza kwomoya kweNtshonalanga kuqhubeka eCzech Republic. Imvula eningi iwela ezinyangeni zasehlobo phakathi neziphepho futhi imvula encane ingena ngo-Mashi, kodwa ngenxa yemali enkulu yeqhwa ayibonakali kangako. Nakuba leziNtaba zeGuant ziyizintaba eziphakeme kunazo zonke e-Czech Republic, akubonakali ukuthi iyingozi kunazo zonke ngoba i-Krkonoše Mountains ikhona emvula yeziNtaba zaseJizera. Emagqumeni, inani lemvula liphathelene ne-1300 mm / ngonyaka, kanti esigodini kungaba yi-1500 mm / ngonyaka. Enye ingxenye yezulu imvula eqhwa, okuyinto eyingxenye yezintaba ezinkulu. Ngokwesilinganiso, usuku lweqhwa lokuqala kwi-Krkonoše Mountains alinakusho ngoba lingaqhwa emagqumeni cishe wonke unyaka wonke. Isembozo seqhwa esivele sisezintabeni eziphakathi kusukela ngo-Novemba kuya ku-Meyi. Ukuqoqwa kweqhwa kunazo zonke kuvela emithambekeni engenhla (Imephu yezwe lapho iqhwa lifinyelela kufika kumamitha angu-15!). Ngokuvamile eNtabeni ZaseGuant umoya ovunguzayo (isivinini esiphezulu somoya esilinganiswa ku-Sněžka 216 km / h).
Okuthunyelwe kwangaphambilini zintaba
esihlokweni esilandelayo Czech Paradise